Yintoni Into Enokonwatyelwa Ekwi-intanethi? - Iziko Loncedo lakwa-Airbnb
Izinto ezinokonwatyelwa kwi-intanethi ziividiyo ezidlala kwangoko okwazi ukuthetha nabanye kuzo ibe ezenzelwe amaqela amancinci. Zikunceda udibane nababuki zindwendwe abazincutshe, uthethe nabantu kwi-intanethi, ibe yindlela emnandi yokudibana nabantu emhlabeni wonke.
Umahluko phakathi kwezinto ezinokonwatyelwa omele uye ubuqu kuzo kunye nezikwi-intanethi
Izinto ezinokonwatyelwa kwi-intanethi zenziwa ngoZoom. UZoom lijelo elikwi-intanethi elisetyenziselwa ukuba neentlanganiso ngeevidiyo ibe lingasetyenziswa kwikhompyutha, kwithablethi nakwifowuni.
Njengezinto ezinokonwatyelwa omele uye ubuqu kuzo nezinto ezinokonwatyelwa kwi-intanethi zimele zifikelele imilinganiselo yomgangatho. Ngaphezu koko, izinto ezinokonwatyelwa kwi-intanethi zimele zifikelele ezinye izinto ezifunekayo ezingakumbi.
Iindwendwe zineentsuku eziyi-30 zokubhala ukuba ibinjani into enokonwatyelwa emva kokuba iphelile. Zinokumxelela umbuki zindwendwe ukuba bekunjani ecaleni zize zitsho ukuba bekunjani ukuze ezo zimvo zibonwe ngumntu wonke ukwenzela iindwendwe ezilandelayo. Funda okungakumbi ngendlela izimvo ezisebenza ngayo, kwizinto ezinokonwatyelwa omele uye ubuqu kuzo nezinto ezinokonwatyelwa kwi-intanethi.
Ungarhoxa xa ubuncinane kushiyeke iintsuku eziyi-7 ngaphambi kokuba iqale okanye kwiiyure eziyi-24 emva kokuba ubhukishile, okanye utshintshe ukubhukisha xa ubuncinane kushiyeke iiyure eziyi-72 ngaphambi kokuba into enokonwatyelwa iqale.Iipolisi zokutshintsha ukubhukisha okusele kwenziwe ziyafana Kwizinto Ezinokonwatyelwa kwi-intanethi zakwa-Airbnb nomele uye ubuqu kuzo.
Izinto ezinokonwatyelwa kwi-intanethi zinexabiso lomntu ngamnye ngokuzenzekelayo. Iindwendwe kufuneka zibhukishe indawo yomntu ngamnye oza kujoyina into enokonwatyelwa. Kodwa ke, ukuba umbuki zindwendwe akanangxaki neendwendwe ezininzi ezisebenzisa isixhobo esinye, uza kuzichazela iindwendwe ukuba zidinga nje ukubhukisha indawo enye kwiphepha lento yabo enokonwatyelwa kwindawo ethi Into Oza Kuyenza nethi Indlela Yokuthatha Inxaxheba.
Kwinto enokonwatyelwa kwi-intanethi, iindwendwe ziyakufanelekela ukubuyiselwa yonke imali yazo ukuba kuye kwakho iingxaki kwezobugcisa, njengengxaki yokungayiva okanye ukuba nengxaki kwevidiyo, zinto ezo ezibakho ngenxa yezixhobo ezizisebenzisayo okanye isixhobo esisetyenziswa ngumbuki zindwendwe. Ungafunda ipolisi yokubuyiselwa imali yonkekwinqaku Lepolisi Yokubuyiselwa Kondwendwe Imali Yento Enokonwatyelwa.
Ukuba ufuna ukuthumela okanye ukucela imali okanye ukubhatalela iinkonzo ezongezelelekileyo kumbuki zindwendwe okanye kundwendwe, njengokucela ukubuyiselwa imali okungaqukwanga kumthetho wokurhoxa, sebenzisa IZiko Lezemali.
Ndiyenza njani into enokonwatyelwa ekwi-intanethi?
Kukho amanyathelo aliqela ekufuneka uwagqibe ngaphambi kokufaka into enokonwatyelwa kwi-intanethi, kuquka ukufunda imigangatho nezinto ezifu…
Yintoni ekufuneka ndiyazi ngaphambi kokuya kwinto endinokuyonwabela eyenziwa kwi-intanethi ngoZoom?
U-Zoom yiwebhusayithi yenye inkampani esebenza ngeintanethi yokubamba intlanganiso ngevidiyo ibe inokusetyenziswa kwiikhompyutha, kwiithable…